မြတ်လှ – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
147152 Views so far
စာေရးသူ - : မြတ်လှ
ရေးသားသူ မြတ်လှ မှ
December 10, 2019 နေ့
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးမြင်မိတဲ့အရောင်ကတော့ ပန်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး တော်တော်များများက ကိုယ့်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အရာတော်တော်များများကို ချစ်စရာကောင်းပြီး မိန်းမဆန် တယ်၊ နှူးညံ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ပန်းရောင်ကိုရွေးတတ်ကြပါတယ်။ (ဥပမာ-အဝတ်အစား၊ accessories၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခန်း)။ အမှန်တကယ်ကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အရောင်လေးတွေက ပန်းရောင် အပြင် တခြားအရောင်လေးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကိုသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းလေးကို တခြားအရောင်တွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်အောင်ဖန်တီးပြလိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ လိမ္မော်ရောင်လွင်လွင်ကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အရောင်စာရင်းထဲထည့်လိုက်တာ ကို အံ့သြနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့လိမ္မော်ရောင်ကို ချစ်စိတ်တက်စေတဲ့အရောင်လို့ UKနိုင်ငံစစ် တမ်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါက တောက်ပတဲ့လိမ္မော်ရောင်နဲ့အလှဆင်ချင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ဒီတောက်ပတဲ့လိမ္မော်ရောင်လေးက အရောင်တောက် တောက်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ အိမ်ခန်းထဲမှာရင်ခုန်မူကိုရှာဖွေချင်တဲ့သူတွေအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂)ဇီးရောင်ပေါက်တဲ့ခရမ်းနုရောင်(Pretty plums and purples)
စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတော်တော်များများမှာ ဇီးရောင်လေးပြေးနေတဲ့ခရမ်းနုရောင်ကို သုံးထားတာတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီအရောင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မူတွေကတော့ စိတ်ဖိစီးမူကိုလျော့ချပေးတာနဲ့ စိတ်ကိုနှစ် သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့အရည်အသွေးတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအရောင်မှိုင်းတာကိုကြိုက်ပြီးအခန်းလေးက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဇီးရောင်လေးပြေးနေတဲ့ခရမ်းနုရောင်လေးက အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ မီးအလင်းရောင်လေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုဇီးရောင်လေးပြေးနေတဲ့ခရမ်းနုရောင်လေးက ပိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီး မှောင်တယ်လို့ထင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင်ကသင့်ရဲ့အိမ်ခန်းကိုစိတ်ကူးယဉ်လည်းဆန်ချင်တယ်။ အရောင်တောက်တောက်တွေလည်းမ ကြိုက်ဘူး။ အရောင်ကသဘာဝဆန်ပြီး အိမ်ခန်းလေးကအေးမြတယ်လို့ခံစားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပြာရင့် ရောင်ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအရောင်ကအိမ်ခန်းကိုအေးမြစေတဲ့အတွက် အပြင်မှာရာသီဥတုပူနေရင် တောင် အခန်းထဲမှာအေးမြမူကိုခံစားရစေမှာပါ။
ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ခန်းအရောင်ထဲမှာ စိမ်းပြာရောင်လည်းပါပါတယ်။ စိမ်းပြာရောင်က စွမ်းအား တစ်ခုခုရှိတယ်လို့ခံစားမိစေနိုင်တဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နံရံလေးဘက်လုံးမှာ စိမ်းပြာရောင်ကိုအသုံးပြု မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရဆိုးစေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်အိပ်ရာရဲ့အပေါ်အမိုး ဒါမှမဟုတ် အိပ်ရာရဲ့ခေါင်းရင်းမှာပဲ သုံး ပေးပါ။ ဒါက ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရောင်ကစားမူပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အနေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အရောင်ကတော့ နွေးထွေးမူပေးနိုင်တဲ့အညိုရောင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ အညိုရောင်ကိုနောက်ခံထားပြီး ပုံမှာပြထားသလိုမျိုး အိပ်ရာဘေးမှာ သန္တာရောင်ထိုင်ခုံထားသလိုမျိုး အခြားသော zestier အရောင်တစ်မျိုးမျိုးကို အခန်းထဲမှာသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝဆန်တဲ့အညိုရောင်က မှောင်တဲ့ ခရမ်းရောင်၊ဇီးသီးရောင်တွေနဲ့ဆင်တူပေမယ့် မှောင်တဲ့အညိုရောင်ကို အဖြူ ဒါမှမဟုတ် ပိတ်နေတဲ့ အဖြူရောင်နဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်ညှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စာဖတ်သူတွေက အိမ်ခန်းကိုအညို ရောင်ကာလာရှိတဲ့သစ်သားတွေနဲ့လည်း အစားထိုးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သစ်သားမျက်နှာကျက်နဲ့သစ်သားနံရံ တွေကိုအသုံးပြုတာကလည်း တကယ့်ကိုနွေးထွေးပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စေပါတယ်။
ပန်းဆီရောင်ကအချစ်ရဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာ သင်နဲ့သင့်ရဲ့လက်တွဲ ဖော်က ပန်းဆီရောင်အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားရတာ ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပန်းဆီရောင်က ကြေးနီ၊ ကြေးဝါနှင့်ရွှေရောင်လိုအရောင်တွေဖြစ်တဲ့ သတ္ထုရောင်တွေနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အခန်းလေးကို ကြည် လင်သန့်ရှင်းတဲ့ပုံဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ခန်းမှာ အဖြူရောင်များများသုံးပေးပါ။ ပန်းဆီရောင်အဖျော့ လေးကနွေးထွေးပြီး သဘာဝဆန်တယ်လို့ခံစားမိစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ပုံထဲကပန်းဆီရောင်ကအရမ်း တောက်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင် ပန်းဆီရောင်တစ်မျိုးတည်းမသုံးပဲ ပန်းဆီရောင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ခရမ်း နုရောင်နဲ့အပြာရောင်တို့ကိုရောပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ အရောင်တွေကအရမ်းကြီးဆန့်ကျင်နေတဲ့ အရောင်တွေမ ဟုတ်တဲ့အတွက် နေရာကိုအရောင်စုံစေမယ့်အပြင် စိတ်အပန်းပါဖြေစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ရင်ခုန်မူပေး နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၇)ပတ္တမြားရင့်ရောင်(Deep ruby red)
ပန်းဆီရောင်ကတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စေပြီး ဆွဲဆောင်မူရှိစေပေမယ့် ဒီအနီရောင်က တော့ မှောင်ပြီးပိတ်နေပါတယ်။ ပတ္တမြားရင့်ရောင်က မှောင်ပေမယ့်အရောင်ကစိုနေတဲ့အတွက် ရွေးချယ်သင့် ဆုံးအရောင်ဖြစ်ပြီး နံရံကထူးခြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကျဉ်းတယ်ဆိုရင်တော့ ခုတင်ခေါင်းရင်းနံရံကိုပဲ အရောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်အခန်းကအလင်းရောင်အားနည်းနေတယ်ဆိုရင် အဖြူရောင်တွေ ပေါင်းထည့်တာ ဒါမှမဟုတ် တခြားလင်းတဲ့အရောင်လေးတွေပေါင်းထည့်တာမျိုးပြုလုပ်ပါ။
ပန်းရောင်နဲ့အနီရောင်ကအချစ်ရဲ့အရောင်ဆိုရင် အနက်ရောင်ကတော့ ဆွဲဆောင်မူရှိတဲ့အရောင်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့်အနက်ရောင်နံရံက အခန်းကိုမှောင်စေပြီး အခန်းကိုသေးသွားစေတဲ့အပြင် ပိတ်လှောင် ကြောက်လွန်ရောဂါရှိသူတွေအတွက် ခက်ခဲစေနိုင်မှာပါ။ သင့်အိမ်ခန်းကကျယ်တယ်ဆိုရင်တော့ အနက်ရောင် က အရွေးသင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့အိမ်ခန်းမှာအနက်ရောင်ကိုသုံးဖို့စိတ်ကူးရှိပေမယ့် ဒီအရောင်ကသင် တစ်ယောက်ထဲကြိုက်နေတာဆိုရင်တော့ အနက်ရောင်ကို တစ်ခြားဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရပါမယ်။ လှပတဲ့အနက်နဲ့အဖြူရောင်အိမ်ခန်းက အရမ်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်စေပြီး ရိုးရှင်းတဲ့အရောင် အ တွဲအစပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်လို့အများစုကသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပန်းရောင်အပြင် အခြားသောစိတ်ကူး ယဉ်ဆန်တဲ့အရောင်တွေကိုစာဖတ်သူအနေနဲ့သိသွားပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းလေးကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းသွားအောင် အခုပဲစိတ်ကူးထဲကချစ်စရာအိမ်ခန်းလေးကိုဖန်တီးလိုက်ပါ။
Myanmar Home & Decor Magazine
သတင်းနှင့် ပြပွဲများ 58 post
ခေါင်မိုးထပ်က ဥယျာဉ်လေး viewed
အလှမွေးငါးကန်ဖြင့် လာဘ်ခေါ်ခြင်း viewed
အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါ လွယ်ကူစေမယ့်အချက်များ viewed
2020 စုစုပေါင်း 78 ပုဒ် ရှိသည်
အိမ်ရောင်းဖို့အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြည့်ကောင်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
December 20, 2018 နေ့
အခုအခါမှာတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက ခေတ်စားလာတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့သင်လိုအပ်တာမှန်သမျှ ကို onlineပေါ်ကနေ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကသင့်အိမ်ရောင်းထွက်ဖို့အတွက် online မှာတင်ပြီး ကြော်ငြာမယ်ဆိုရင် သင်ရောင်းမယ့်အိမ်ပုံစံကိုအရင်ဆုံးမြင်မှာကတော့ အိမ်ပွဲစားတွေဖြစ်ပြီး တင် ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေက စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပဲ ပွဲစားတွေကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဝယ်သူတွေနဲ့တွေ့ ဆုံဖို့လွဲချော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်ရောင်းဖို့အတွက် Online မှာဓါတ်ပုံတင်တဲ့အခါ သင့်အိမ်ရဲ့အပြင်အဆင် က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့နဲ့ ပွဲစားတွေ၊ ဝယ်သူတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုပြောပြပေး မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်နေ့မတိုင်ခင် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်အိမ်ရောင်းထွက်ဖို့အတွက် အကူအညီကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
အိမ်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အစီအစဉ်စဆွဲတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်က အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တကယ်ပဲပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့်အေးဂျင့်တွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ အခုပြောပြပေးမယ့် မေးခွန်းအနည်းငယ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့်အေးဂျင့်ကို မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
(၁) အေးဂျင့် မှာ ကျွမ်းကျင်ဓါတ်ပုံဆရာရှိရဲ့လား?
(၂) သင်ကိုယ်တိုင်ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေသုံးမလဲ။ ဒေါက်တိုင်တွေပါတဲ့ ပရော်ဖက် ရှင်နယ်ကင်မရာလား ဒါမှမဟုတ် ဆဲလ်ဖုန်းလား?
(၃) လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်အေးဂျင့် ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်ပုံဆရာက ပိုမိုအလင်းအားကောင်းစေတဲ့ Lighting လိုအ ရာတွေ ယူလာနိုင်မလား?
(၄) ပုံမှန်အားဖြင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ထားပေးလဲ?
(၅) ဓါတ်ပုံထဲမှာ အိမ်ပုံစံကကြည့်ကောင်းစေဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
(၂) ပြတင်းပေါက်တွေကိုသန့်ရှင်းပြီး Shadeတွေကိုဖွင့်ထားပါ။
သင့်အိမ်ကိုဓါတ်ပုံထဲမှာတောက်ပနေအောင် ပြုလုပ်တဲ့အခါ လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်ကအချိန်အ ကြာကြီးရှိနေသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပြတင်းပေါက်တွေကိုသန့်ရှင်းပြီး Shade တွေကိုဖွင့်ထားပါ။
(၃) ပိုကြည့်ကောင်းစေဖို့ အိမ်တွင်းမှာ အပင်ထားရှိပါ။
သင့်အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ အစိမ်းရောင်အပင်လေးထားရှိလိုက်တာက အားအင်အ ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ခံစားရစေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အပင်ရဲ့မကောင်းတော့တဲ့အရွက်တစ်ချို့ကို ကပ်ကြေး ဒါမှမ ဟုတ် ချွန်ထက်တဲ့အရာတစ်ခုခုသုံးပြီး ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။ ကြီးမားတဲ့အရွက်တွေကိုတော့ နှူးညံ့တဲ့အဝတ်လေးနဲ့ သုတ်ပေးပါ။
(၄) ကောင်တာပေါ်မှ ပစ္စည်းတွေရှင်းလင်းထားပါ။
ရှုပ်ပွမနေတဲ့ကောင်တာက သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကို ပိုပြီးကျယ်ဝန်းတယ်လို့ မြင်စေမှာပါ။ မလိုအပ်တာတွေ အကုန်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရင်တော့ ကောင်တာကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားလိုက်ပါ။ ပေါင်မုန့်မီးကင်စက် နဲ့ ကော်ဖီ ဖျော်စက်လိုမျိုး သေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခု၊နှစ်ခုလောက်ဖယ်ရှားလိုက်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပိုအနေနဲ့ ရှိနေတာကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပစ္စည်းအသေးစားလေးတွေက တခါတရံမှာ သင့်အတွက်ကောင်း မွန်တဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၅) ကြမ်းပြင်တွေကို ပြောင်လက်နေအောင်သန့်စင်ပါ။
သစ်သားကြမ်းပြင်တွေက သင့်အိမ်ရောင်းထွက်ဖို့ အဓိကပွိုင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ကြမ်းပြင်ကို ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် သစ်သား ကြမ်းခင်းလေးက ဓါတ်ပုံထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေစေမှာပါ။ အဲ့နည်းအတိုင်းပဲ stainless Steel တွေကိုပြုလုပ် မယ်ဆိုရင် ကြမ်းပြင်ကတလက်လက်တောက်ပနေမှာ သေချာပါတယ်။
(၆) ရေချိုးခန်းထဲကမလိုအပ်တော့တာတွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
ရေနှူးနေတဲ့ဆပ်ပြာကို စင်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားပါ။ ရေချိုးခန်းနဲ့ သန့်စင်ခန်းသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ များပြား လှတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ရေချိုးခန်းနဲ့သန့်စင်ခန်းထဲမှာ အကုန်သိုလှောင်ထားဖို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းလိုက်ကာတွေကိုဆွဲဖွင့်ထားတာ၊ မှန်တွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတွေအပြင် အိမ်သာကမုတ်ကိုပိတ်ထားပါ။ ပြီး ရင်တော့ ရေချိုးခန်းကိုအလင်းရောင်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ထားပါ။ နောက်ပြီး နှူးညံ့တဲ့အဖြူရောင်သဘက်တစ်ထည်သင့်မှာရှိတယ်ဆိုရင် အသုံးပြုထားတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ သဘက်အ ဟောင်း ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။. ဒီလိုဝယ်ယူထားတဲ့ သဘက် အသစ်တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ နဂိုအဝတ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီး ထားထားလိုက်ပါ။
ဓါတ်ပုံတွေကနေ မကောင်းတဲ့အရာ၊မပြည့်စုံတဲ့အရာမှန်သမျှကို မြင်ရတဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်နေ့မှာ မရိုက်ခင်အချိန်အနည်းငယ်လောက်ကို အိပ်ရာပေါ်ကမလိုတဲ့အရာတွေ ကို ရှင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့အိပ်ခန်းလေးက ဓါတ်ပုံထဲမှာအလှဆုံးဖြစ်နေဖို့အတွက်ကတော့ ခေါင်းအုံး အပေါ် ပျော့ပျောင်းတဲ့ခြုံထည်ထင်ထားတာ၊ တောင့်တင်းတဲ့ အိပ်ရာခင်းကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်ထားတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အိပ်ရာဘေးကစားပွဲခုံပေါ်က အရေးကြီးပစ္စည်းတွေမပျောက်အောင်နဲ့ ရှုပ်ထွေး မနေအောင် ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ခဏလောက်ဖယ်ရှားထားလိုက်ပါ။
(၈) လျှောက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ မလိုတာတွေကိုသိမ်းထားပါ။
သင့်အိမ်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က သင့်အိမ်ကကျယ်ဝန်းပြီး သန့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ ဖြစ်သလို သင့်အိမ်ကိုဝယ်ယူမယ့်သူတွေလာရောက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ဖယ်ထုတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ဖိနပ်စင်၊ စာရွက် စာတမ်းတွေနဲ့mailအတွက် ဖိုင်၊ Remote controls၊ magazines၊ ကလေးကစားစရာ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ ကျွေးတဲ့ခွက် စတာတွေနဲ့ ရူပ်ပွနေတဲ့ သံတိုသံစ၊ ဓါတ်ပုံအသေးအမွှားစတာတွေကို ဓါတ်ပုံဆရာရောက်မလာ ခင် သိမ်းထားလိုက်ပါ။
ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်နေ့မှာ သင့်အိမ်ကသဘာဝအလင်းရောင်နည်းနေရင် လိုအပ်တဲ့ အလင်းပမာဏကို ဓါတ်ပုံဆရာက studio Lighting သုံးပြီးရိုက်ကူးပေးလိမ့်မယ်လို့ တစ်ထစ်ချမယူဆထားပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဓါတ်ပုံဆရာအနေနဲ့ တစ်ခုခုကြောင့်မေ့နေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တတ်ပြီး သင့်အိမ်ကမီးခလုတ်တွေကို ရှာမတွေ့နိုင် တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဓါတ်ပုံမရိုက်ခင် အချိန်ခဏယူပြီး အလင်းရောင်ရနိုင်မယ့် မီးသီး၊ မီးအိမ် စတာတွေကိုဖွင့်ထားပြီး အပြင်ကအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရအောင်လို့ လိုက်ကာနဲ့ Shade စတာ တွေကိုဖွင့်ထားမထားဆိုတာ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်စစ်ဆေးပါ။
(၁၀) ထူးခြားမူများကို အဓိကထားပါ။
သင့်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ gas မီးဖိုထားဖို့နေရာ ဒါမှမဟုတ် ပုံမှာပြထားသလို မီးတောက်တွေပြုလုပ် လို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိရဲ့လား။ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အိမ်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်နေ့မှာ မီးအလင်းကိုသေချာ လေးလုပ်ပါ။ အဲ့အတိုင်းပဲ သင့်မှာ hot tab ဒါမှမဟုတ် အိမ်နောက်ဖေးမှာရေကူးကန်လိုမျိုး ဟိုက်လိုက်ဖြစ်နိုင် တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကိုဓါတ်ပုံထဲမှာထင်ရှားမူရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သန့်ရှင်းနေဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
(၁၁) ကြည့်ကောင်းနေဖို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။
ဒီအချိန်က major landscape အပြောင်းအလဲနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် မြက်ခင်းပြင် ကပြန်မစိမ်းလန်းတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါမျိုးတွေကို စိုးရိမ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုစိုးရိမ်နေ မယ့်အစား အမြန်ပြင်ဆင်ဖို့ကိုသာအာရုံထားပြီး ဓါတ်ပုံထဲမှာသင့်အိမ်က ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့အတွက်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပန်းပင်ကမကောင်းတော့တဲ့အပွင့်တွေကိုညှပ်ပစ်တာနဲ့ အပင်ကကြွေကျလာတဲ့သစ်ရွက် တွေကိုဝင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးကိုလှည်းထုတ်တာတွေပြုလုပ်ပြီး ရှုပ်ပွနေတဲ့အရာတွေကိုခြံပြင်ကိုရှင်းထုတ်ပါ။ ပြီး ရင်တော့ ပန်းအိုးထဲကပန်းပင်ရဲ့အပွင့်အဖူးလေးတွေကို လှပသွားအောင်ပြုပြင်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ခြံဝန်းလေးကကြည့်ကောင်းနေတော့မှာသေချာပါတယ်။ သင့်အိမ်ကိုလမ်းမပေါ်ကနေရိုက်ဖို့ ဓါတ်ပုံဆရာကအ ဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ကားကို အိမ်ရဲ့အရှေ့မှာထားခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှသာသင့်အိမ်ရဲ့မြင်ကွင်းကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းမြင်နိုင်မှာပါ။
အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပရိဘောဂတွေကသေ သေသပ်သပ်ရှိရဲ့လား၊ အမှိုက်တွေကိုရောသေချာရှင်းလင်းပြီးရဲ့လား စတာတွေစစ်ဆေးပါ။ ဒီလိုစစ်ဆေးမူတွေ ပါပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင့်အိမ်က အိမ်ဝယ်ချင်သူတွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေမှာပါ။
သင့်ရဲ့အိမ်သစ်အတွက် ရိုးရှင်းပြီး ဆွဲဆောင်မူရှိသော ဒီဇိုင်းများ
December 17, 2018 နေ့
ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အိမ်တစ်အိမ်အတွက် ကိုယ့်ဘာသာဒီဇိုင်းပြင်ဆင်ဖို့က အရမ်းကိုစွန့်စားလွန်းသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင် အမြင်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ပြဿနာမရှိနိုင်ပေမယ့် ကျွန်မတို့လိုသူတွေအတွက်ကတော့ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ မှ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မူရှိအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးအခက်တွေ့စေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိမိရဲ့ အိမ်အသစ်လေးက ရိုးရှင်းမူတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မူရှိနေအောင် ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
(၁) နံရံကိုလင်းစေတဲ့ အရောင်လေးတွေအသုံးပြုပါ။
နံရံကိုလင်းစေတဲ့ အရောင်တွေကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အခန်းက ပိုပြီးတော့ကျယ်တယ်လို့ ခံစားရစေမှာပါ။ ကြီး မားတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ မှန်တွေကို လုံလောက်အောင်အသုံးပြုတာက သဘာဝအလင်းရောင်အလင်းပြန်စေရုံမကပဲ နေရာ ကိုပိုကျယ်စေတယ်လို့ မြင်မိစေမှာပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ မှောင်တဲ့အရောင်တွေကိုရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အခန်း ကို ပိုသေးတယ်လို့ခံစားမိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) တောက်ပသော အရောင်တွေအသုံးပြုပါ။
သင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ အခင်း ဒါမှမဟုတ် လေးချောင်းထောက်ဆိုဖာထိုင်ခုံတွေအတွက် တောက်ပတဲ့အရောင်တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် တောက်ပပြီး သင့်ရဲ့အခန်းကိုအသွင်ပြောင်းသွားစေမှာပါ။
(၃) အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အပင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပါ။
သင့်အိမ်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အပင်ငယ်လေးတွေထားရှိပါ။ ဒီလိုထားလိုက်ခြင်းက နေရာကို ပိုမိုလှပ သွားစေပြီး အိမ်ရဲ့လေထုကိုလည်း သန့်စင်စေနိုင်တဲ့အပြင် စိုထိုင်းမူကိုပါ ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
(၄) ပြတင်းပေါက်လိုက်ကာ တပ်ဆင်ပါ။
ဖုန်တွေပေနေတဲ့လိုက်ကာတွေနဲ့ တိုလွန်းတဲ့လိုက်ကာတွေကတော့ ထားဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ ကန့်လန့်ကာတွေကို လိုသလိုစီမံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တွေအကြာကြီး သပ်ရပ်ကောင်းမွန်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့အမြင်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) အထည်များကို ရောစပ်ပြင်ဆင်ပါ။
အထည်တွေ ပိတ်စတွေကို ပရိဘောဂအတွက် ဒါမှမဟုတ် ခြေသုတ်ခုံ၊ ခေါင်းအုံးစွပ် အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပေးပါ။ ကွဲ ပြားတဲ့အရောင်ဖန်တီးမူတွေက သင့်ရဲ့အခန်းနေရာကို နွေးထွေးမူတွေယူဆောင်လာပေးမှာပါ။
(၆) မှန်ရဲ့အလင်းနဲ့ မှန်ရဲ့ပုံရိပ်
မှန်တွေထားရှိထားတဲ့နေရာကို အလင်းရောင်က ပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့် တိုက်ရိုက်ဖြတ်ပြီး သင့်ရဲ့အခန်းနေရာဆီကို ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့နံရံကို လိုက်ဖက်ညီအောင် မှန်နဲ့အလှဆင်ဖြည့်စွက်လိုက်ခြင်းကလည်း အနုပညာ တစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပရိဘောဂတွေကို မှန်မှာပုံရိပ်လေးထင်နေအောင် ဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေမှာပါ။
(၇) Slip Cover
ကလေးတွေ မကြာခဏအသုံးပြုတဲ့ Slip Cover က အခန်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင် Slip Cover မွေ့ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းမယ်ဆိုရင် ပေါ့ပါးပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီး တဲ့ပရိဘောဂတွေကို နှစ်တွေအကြာကြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းက သင့်ရဲ့ အခန်းကိုနွေးထွေးစေမှာပါ။ ရွှေရောင်က ဘယ်သောအခါမှရိုးမသွားတဲ့ ကောင်း မွန်တဲ့ အဆင်တန်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၉) ပရိဘောဂတွေကို နှစ်ဆသုံးပါ။
ဆိုလိုချင်တာကတော့ ပရိဘောဂတွေကို သာမန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေထက် ပိုပြီးပြုလုပ်စေချင်တာပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေး တာက နေရာစားသက်သာအောင်ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်သလို ဖန်တီးမူတစ်ခုကို ပြသပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာပြထားသလို နောက်မှီနဲ့လက်တန်းမပါတဲ့ခုံတွေနဲ့ coffee table က နေရာစားသက်သာစေသလို လူလည်းပိုဆန့်စေပါတယ်။
(၁၀) ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်သောသားရေထိုင်ခုံကို သုံးပါ။
သားရေက အလွန်အသုံးခံတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ထူးခြားတဲ့အဖြူရောင်သားရေထိုင်ခုံကိုလိုချင်ရင်တော့ နှစ်တွေအကြာကြီးစောင့်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေကြာရင်ကြာသလောက်သားရေက တန်ဖိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သားရေ ထိုင်ခုံကိုအသုံးပြုတာက သင့်ရဲ့အိမ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်ရရှိစေမှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ အိမ်မှာ သေးငယ်တဲ့ကော်ဇောတစ်ခုတောင်မထားချင်ဘူးလား ဒါမှမဟုတ် ကော်ဇောမလိုဘူးလို့ တွေးနေ ပြီလား။ အမှန်ကတော့ ရှေ့ခြေထောက်လေးတွေတင်ထားဖို့ ကော်ဇောလေးတွေထားသင့်ပါတယ်။ အရောင်အဆင်းရှိတဲ့ ကော် ဇော် ဒါမှမဟုတ် လေးထောင့်ပုံစံကော်ဇောလေးထားတာက ကောင်းမွန်တဲ့လိုက်ဖက်မူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အိမ်ရဲ့နေရာတစ်နေရာမှာ ဆွဲဆောင်မူရှိတဲ့ အရာတစ်ခုကိုရေးဆွဲလိုက်ပါ။ တစ်ကယ်လို့သင်က မျက်စိရူပ်တာကိုမ ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာက သင့်အိမ်ကိုဆွဲဆောင်မူရှိစေမှာအမှန်ပါ။
ကျွမ်းကျင်တည်ဆောက်သူတွေက အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်သွားတဲ့ပုံစံကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ဖန်တီးတည်
ဆောက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအလင်းဖြန့်ကျက်လိုက်ခြင်းက အခန်းရဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းရောင်ရရှိစေပြီး အလင်းက တစ် နေရာတည်းကို စူးနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ တစ်နေရာတည်းကိုပဲ အလင်းဖြာကျနေပြီးအလင်းအားနည်း တဲ့ စားပွဲတင်မီးအိမ်လိုပုံစံမျိုးကိုပါ သင့်အခန်းထဲမှာ ထားထားမယ်ဆိုရင် အခန်းအနေအထားကဆွဲဆောင်မူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့အိမ်အသစ်လေးကို အများနဲ့မတူပဲ ထူးခြားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးလည်းမဆန်းပြားချင်တဲ့သူတွေအတွက် အခုနည်းလမ်းတွေက အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။